आजको राशिफलः बि.स.२०७८ साल जेष्ठ २५ गते मंगलबार इश्वी सन २०२१ जुन ८ तारीख – Ap Nepal
आजको राशिफलः बि.स.२०७८ साल जेष्ठ २५ गते मंगलबार इश्वी सन २०२१ जुन ८ तारीख
आज श्री शाके १९४३ बि.स.२०७८ साल जेष्ठ २५ गते मंगलबार इश्वी सन २०२१ जुन ८ तारीख जेठ कृष्णपक्ष त्रयोदशी तिथी पश्चात चतुर्दशी तिथी भरणी नक्षत्र पश्चात कृत्तिका नक्षत्र अतिगण्ड योग पश्चात सुकर्मा योग भद्रा करण चन्द्रमां मेष राशिमा १३ः०७ बजे सम्म पश्चात बृष राशिमा आनन्दादि योगमा मुशल योग राक्षसनाम संवत्सर सुर्य उत्तरायणं ग्रीष्म ऋतु सिथिचह्रेपूजा (ज्यो.प.सरोज घिमिरे)
मेष राशि (चु, चे, चो, ला, लि, लु, ले, लो, अ) नयाँ कार्य थालनिका निम्ति आट र साहशको कमि आउनेछ । भौतिक स्रोत साधनको प्रयोगमा समय ब्यतित हुने योग रहेको छ । मध्यान पश्चात ब्यक्तिव बिकाशमा जुट्ने समय रहेको छ । कुलकुटुम्ब हरुको साथ सहयोग राम्रो प्राप्त हुनेछ । मेहेनत को रामा्रे फल प्राप्त हु्नेछ । खानपानमा बिशेष ध्यान दिनुहोला ।
बृष राशि (इ, उ, ए, ओ, बा, बि, बु, बे, बो) बिश्वासिलो ब्यक्ति हरुबाट धोका हुन सक्छ । शत्रुपक्ष मजबुत रहनाले कार्य क्षेत्रमा बिशेष सजग रहनु पर्ला । मध्यान पश्चात मान प्रतिष्ठामा बृद्धि हुनेयोग परेकोछ । मान्यजनको साथ सहयोग प्राप्त होला । भोगबिलासमा समय ब्यतित हुनेछ । कार्य सम्पादनमा गोप्यताको आवश्यक रहनेछ ।
मीथुन राशि (का, कि, कु, घ, ङ, छ, के, को, ह) मित्र जनको साथ सहयोग बाट कार्य सम्पादनमा मदत पूग्नेछ । आफ्नो चार्तुयताले कार्य सम्पादन गर्दा सबैको चर्चा को बिषय भईन सकिनेछ । मध्यान पश्चात आम्दानि क्षेत्रमा बृद्धि हुने योग रहेको छ । गरिरहेको काममा त्यती मन नलाग्नाने सामान्य अप्जस आईपर्ने छ ।
कर्कट राशि (हि, हु, हे, हो, डा, डि, डु, डे, डो) सभासम्मेलनमा सरीक हुने अवसर प्राप्त हुनेछ । बिद्यार्थी वर्गका निम्ती समय त्यति उत्तम रहेको छैन । मध्यान पश्चात मेहेनत र परीश्रम को कदर हुन सक्ने योग रहेको छ । रचनात्मक कार्यमा समय ब्यतित रहनेछ । बिद्या प्राप्ति को योग रहेको छ । सहि समयमा सहि निर्णय गर्न सकिने छ ।
सिंह राशि (मा, मि, मु, मे, मो, टा, टि, टु, टे) गैर ब्यक्तिको संगतले अपजसको सामना गर्नु पर्ला । यात्रा कारक समय रहेको छ । पारीवारिक झोर झमेलाको सामना गर्नुपर्ने सम्भाबना रहेको छ । मध्यान पश्चात भौतिक श्रोत साधनको प्रयोगमा मन प्रशन्न रहनेछ । कार्य क्षेत्रमा लगाईएको कर्मको प्रतिफल प्राप्तीका निम्ती सामान्य प्रतिक्क्षा गर्नु पर्नेछ ।
कन्या राशि (टो, प, पि, पु, ष, ण, ठ, पे, पो) ईष्ट मित्र बिच सामान्य बादबिवादको योग रहेको छ । स्वास्थ सम्बन्धि समस्याले सताउन सक्नेछ । मध्यान पश्चात मित्र तथा दाजु भाई बिचको सम्बन्धमा सुधार आउनेछ । मनोरञ्जनमुलक यात्रा को सम्भाबना रहेकोछ । कार्य कुसलतालको क्षेत्रबाट मान्यजनको मन जित्न सफल रहने योग रहेको छ ।
तुला राशि (र, रि, रु, रे, रो, ता, ति, तु, ते) भोग बिलास को क्षेत्रमा समय ब्यतित हुनेछ । मनोबिलासिताका सामान खरीद योग रहेको छ । कार्य क्षेत्रको लापरबाहिले सामान्य झन्झट आईपर्ला । मध्यान पश्चात खानपानमा बिशेष ध्यान दिनु होला । खुट्टा तान्ने ब्यक्ति बाट बच्नु पर्ने समय छ । बाणी तथा स्वास्थका क्षेत्रमा ध्यान दिएको बेश हूनेछ ।
बृश्चिक राशि (तो, ना, नि, नु, ने, नो, या, यि, यु) सामान्य खर्च हुने योग रहेको छ । यात्रामा सामान्य कठिनाई आईपर्न सक्छ । तपाईको कार्यको फाईदा मित्रजनले प्राप्त गर्नेछन । मध्यान पश्चात जिवनसाथीको सहयोगद्वारा अप्रत्यासित लाभको अवसर मिल्नेछ । शारिरीक आलस्यताका कारण कार्य सम्पादनमा सामान्य ढिलाईको योग रहकोछ ।
धनु राशि (ये, यो, भ, भि, भु, ध, फा, ढ, भे) अरुको साथ सहयोग बाट बिग्रन लागेको काम बन्ने छ । सामान्य अप्रिय खबरले मानसिक चिन्ता ब्यहोर्नु पर्ला । मध्यान पश्चात जिद्दी स्वभावको कारण प्रतिश्पर्धामा पराजयको सामना गर्नुपर्नेछ । समयको सदुपयोग गर्न नसक्नाले मित्रजनहरु बिच पछि परीने योग रहेकोछ ।
मकर राशि (भो, ज, जि, खि, खु, खे, खो, गा, गि) सामाजिक कार्यमा आफु अग्रसर रहेपनि त्यसको श्रेय भने अरु लाई मिल्नाले सामान्य खिन्नता बोध हुनेछ । समयमा सहि निर्णय गर्ने क्षमता बढ्ने छ । मध्यान पश्चात बौधिक ब्यक्तिहरुका बिचमा आफु कमजोर भएको महसुस हुनेछ । मानसिक चन्चताले बिद्या असफल रहला ।
कुम्भ राशि (गु, गे, गो, सा, सि, सु, से, सो, द) मित्र जनको साथ सहयोग बाट बिग्रन लागेको काम बन्ने योग रहेको छ । साझेदारी कामको आम्दानि भने उत्तम रहनेछ । मध्यान पश्चात आम्दानिको क्षेत्र सबल रहेता पनि कार्यको क्षेत्रमा भने त्यति मन लाग्ने छैन । भोगबिलासीताका क्षेत्रमा मन जानेछ । हतासमा गरीएका निर्णयले असफल बनाउन सक्नेछ ।
मिन राशि (दि, दु, थ, झ, ञ, दे, दो, च, चि) सञ्चित रकम खर्चहुने योग रहेको छ । अरुको दबाबको कारण मानशिक समस्या आई पर्ने छन । पठनपाठनमा भने समय राम्रो रहेको छ । मध्यान पश्चात नजिकका मित्रजनहरु बिचको सम्बन्ध टाढिन सक्ला । बल तथा पराक्रम बृद्धि हुने छ । आम्दानि क्षेत्र उत्तम रहने योग रहेको छ ।
Prevलगातार बढेको सुनको मूल्य आज सोमबार घट्यो, तोलामा कतिमा कारोबार भयो त ?
Nextभाइरल अशोक दर्जी र समिक्षा अधिकारीको आ; वाजमा मेरो छोरा सार्ब जनिक , राता-रात चर्चाको शिखरमा-हेर्नुहोस (भिडियो सहित )
४१ वर्ष भारतीय जेल बस्नुको भित्रि रह स्य यस्तो रहेछ, दुर्गाप्रसाद माथि ष ड्यन्त्र भएको थियो त ? सबैलाई भाबुक बनाउने काहानी (भिडि, यो सहित)
नेपाल पैसा पठाउँदै हुनुन्छ ? हेर्नुहोस आज यस्तो छ बिनिमय दर
सुन किन्ने सोचेइमा हुनुन्छ ? आज घट्यो सुनको मुल्य ..हेर्नुहोस
ओलीलाई नेता कार्यकर्ताले बालुवाटारदेखि बालकोटसम्म सयौं मोटरसाइकल र गाडीले स्कर्टिङ र स्वागत गरे..
अन्ततः काठमाण्डौंको होटलबाट प्रेमी सहित यसरी फेला परिन लाहुरेकी श्रीमती (भिडियो सहित) (117328)
६ वर्ष पछि म,रेको मान्छेको चिहा’ न १२ बजे राती खन्नुको कारण बल्ल बुबाले बताʼए -हेर्नुहोस् (भिडियो सहित) (70839)
“अनिशालाई भेट्न मन छ हो बा,बु” भनेर सोध्दा कन्चनको यस्तो जवाफ हेर्नुस् (भिडियो सहित) (44958)
मोटरसाइकलमा कलंकी जाने भनेर लि’फ्ट मागेकी युवतीले जब चोभार पुर्‍या,इन् र त्यसपछि… (39304)
बलिउडलाई टक्कर दिने नेपालीको भिडियो ‘सिक्किम जाने रेल’ !-हेर्नुहोस (भिडियो सहित) (37154)
मैले दिन नस;केका सबै खु:शि तिमीलाई मिलोस भन्दै छुट्टिए श्रीमान-श्रीमती (भिडियो सहित) (36162)
लाहुरेकी श्रीमतीले रूदै दिईन यस्तो बयान भन्छिन् “मोवाइल गरगहना सबै बेच्यो, मलाई बच्न लागेको रैछ” (भिडियो सहित) (35378)
करोडौंले हेरेको गीतका यि गायकलाई कसैले चिन्दैन, बाच्नै नसकेपछि बिदेश जाँदै (भिडियो सहित) (35038)
पिल्स: कस्ता म’हिला हरुले प्रयोग गर्न सक्छ’न् ? कहिले खाने र कसरी गर्भ रहन दिं,दैन ? (33179)
एक रुपै;या खर्च न; गरी बिहे गरेका भा’इरल जोडीलाई, ३५ लाख भन्दा बढीले यस्तो गरे (भि,डियो सहित) (32119)
कुखु, राको भाले मर्दा सबै गाउँले गय मलामी, गरियो यसरी दाह’ संस्कार (भिडियो सहित)
आज घट्यो सुनको मुल्य,हेर्नुहोस् आज यस्तो छ कारोवार मुल्य..
चोरी-गर्न प्रहरीको घरमा पसेका चोर घरधनीकी छोरीको कोठामा गएर सुतेपछि….
भुँइमा चि’प्लिएर ल’ड्ने व्यक्तिले सुपरमार्केटबाट पाए २ करोड १० लाख.